Whitening Products | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Posts tagged "Whitening entana"
Maro Whitening vokatra avy tao fa afaka manampy anao manala ny stains na mavo nify. Hahita Whitening ravin, ny lovia feno whitener na Whitening ravin. Ireo fomba rehetra safidy lehibe ho an'ny matihanina lafo vidy Whitening.
Frezy dia azo ampiasaina ho toy ny voajanahary fomba mahafotsy nify. Ny voajanahary Kamban-teny hita ao amin'ny frezy dia mahafotsy ny nify tsy mampiasa zavatra simika. Afaka Masy ny frezy ho Mametaka izay azonao miborosy amin'ny nify, ary avy eo dia aoka hipetraka mandritra ny minitra maromaro, na nanapaka ny frezy amin'ny tapany, manosotra izany dia tao ny nify ho vetivety foana.
SOSO-KEVITRA! Voankazo dia voajanahary lehibe sy fomba mahafotsy nify sasany ny fotoana. Ohatra iray ny voankazo sasany izay miasa amin'ny lehibe Whitening ny nify ho frezy sy ny voasary.
Ataovy azo antoka ny nify no antsakany sy andavany nanadio alohan'ny fampiasana an-trano Whitening nify regimen. Whitening nify vokatra no asa tsara indrindra raha mampihatra azy ireo eo amin'ny madio nify. Raha toa ka ny nifiny dia tsy madio rehefa manomboka mahafotsy azy misy tsara vintana fa ny vokany mba ho uneven sy fitarainana.
Teeth Whitening be ravin dia misy ary tena takatry ny. Ianao mila fotsiny hametraka ny esory amin'ny nify, dia hamela azy any mandritra ny fe-potoana voatondro ny fotoana toy ny manadio sy whitens ny nify. Raha vao malaza, Whitening ravin very fitia tamin'ny maro noho ny mahantra vokatra.
SOSO-KEVITRA! Ny nify Whitening vokatra mety hahatonga ny nify mora ny vokatra mampiasa. Tena maharary na dia ihany maharitra.
Mila ny ho malina tsara rehefa mihinana na misotro rehefa manana Whitening ny nify paika natao. Ny nify dia hatao voaloto mora kokoa ny mandray stains rehefa avy whitened. Zava-dehibe ny tsy maizina miloko sakafo sy zava-pisotro araka ny vao whitened nify. Kafe dia ohatra amin'ny zavatra izay mora aoka ianao hifantoka tanteraka amin'ny ny nify, ary mety hahatonga discoloration.
Ny zava-dehibe indrindra izay azonao atao mba hahazoana ny mahagaga fotsy tsiky dia ho any amin'ny mpitsabo nify ho tapaka cleanings. Ataovy azo antoka ny handeha ho madio rehetra 6 volana. Tadidio foana ny hanorina fanendrena vaovao raha mbola teo ny mpitsabo nify ka tsy manadino taty aoriana. Anontanio ny nify birao mba hampahatsiahy anao talohan'ny amin'ny antso an-telefaonina.
SOSO-KEVITRA! Miborosy nify taorian'ny sakafo rehetra no lehibe fomba mba hiaro azy afaka amin'ny stains. Maro ny sakafo sy zava-pisotro manana ny hery anaty mba hampietreny ny nify.
Mitondra borosy nify kely izay ampiasaina rehefa avy nihinana sakafo sugary. Vatomamy ireo mifikitra amin'ny nify, ary mahatonga staining na hanampy izay mety efa manana. Rehefa avy nihinana ny zava-mamy, miborosy nify ho fohy fe-potoana. Toothpaste dia tsy ilaina; kirihitra fotsiny ny nify, ary avy eo dia hosasany amin'ny rano tsara.
Leviora, rehefa miaraka peroxyde, tsy ampy ny toetra toothpaste izay mampihena ny bakteria sy manala stains. Andramo fanilihana ny nify amin'ny vahaolana ho eo 5-10 minitra. Foana tandremo fa tsy fanilihana mafy loatra, araka ireo zavatra mifangaroharo afaka tena hampahatezitra ny ramy.
SOSO-KEVITRA! Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hahazoana antoka ny nify mbola fotsy dia ny hanorina fotoana tsy tapaka ho an'ny mitsidika ny mpitsabo nify mba hanadio azy ireo. Matihanina ihany no afaka manafoana taona fanadiovana ny tartar hamolavola-up sy ny discoloration.
Raha ny nify manomboka mangorintsina, na mahatsiaro ho mora tohina, rehefa mampiasa ny vokatra izay whitens nify, hajanony ny fampiasana avy hatrany. Afaka manao bebe kokoa ho fahavoazana noho fantatrao ny nify, noho izany dia tsara indrindra amin'izay fotoana izay dia mba hahazo matihanina tolo-kevitra. Anontanio ny mpitsabo nify momba ny safidy.
SOSO-KEVITRA! Tapaka flossing sy miborosy ny nify eo amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny Whitening ny nify. Amin'ny fampiasana ireo teknika, dia hampihena takelaka buildup, ny tena mahatonga ny nify discoloration.
Foana ny manaraka ny toro-lalana rehetra eo amin'ny an-trano Whitening vokatra ampiasainao. Mety hampahatezitra ny ramy sy simba ny teeth.Use nify Whitening vokatra marina ihany araka ny nampianarina ny mpanamboatra.
Rehefa avy maintsy ny nify Whitening fomba fanao, dia zava-dehibe fa miborosy nify taorian'ny sakafo rehetra. Raha aoka sakafo hanangana amin'ny nify, dia mety hiteraka fitomboana bakteria ao am-bavanao. Bakteria afaka manalefaka ny nify, izay mety hahatonga azy ireo bebe kokoa sy mora fahavoazana fahasimban'ny.
SOSO-KEVITRA! Aza sigara, kafe sy ny dite mahery. Izany zavatra izany no mahasakana ny nify mainty.
Misotro kafe sy ny ranon-javatra hafa staining alalan'ny mololo no fomba mahomby ny mahazo fotsy nify. Ny mololo manome ny fotoana mba hahatonga nify staining. Ny ranon-javatra dia hialana ny nify sy mandeha hidina mahitsy ny vavanao.
Ataovy frezy ranom amin'ny borosy nify sy borosy toy ny ara-dalàna ny mahafotsy ny nify. Ny asidra avy amin'ny ranom manalefaka ny nify karazana verinia, dia toy izany no manampy anao mba hanadiovana hiala ny ankamaroan 'ny discoloration avy amin'ny nify. Ianao ho afaka hamerina ny tapitrisa dolara ho an'ny lavitra tsiky kely noho ny tapitrisa dolara mampiasa io fomba.
SOSO-KEVITRA! Rehefa avy Whitening ny nify, mampihatra Vaseline mba hampahatsiahy anao hitandrina mitsikitsiky. Mety tsy ho tsara tsirony, Fa tsara amin'ny famoronana ny sakana izay manome ny nify fiarovana avy staining nandritra ny roa ora.
Miborosy nify tsy tapaka mba ho azo antoka fa te-foana tsiky lehibe. Sakafo sy ny zavatra hafa dia afaka manorina eo amin'ny nify sy hampietreny azy ireo rehefa afaka fotoana. Tokony tsy ho tezitra ny nify discoloration raha mbola tsy tapaka foana tsy tapaka nify-fanilihana fahazarana.
Aza mampiasa miloko mouthwashes. Ireo mouthwashes mety freshen ny fofonaina, fa izy ireo dia mety voalotoko ny nify ao amin'ny dingana. Ny toaka dia ingredient amin'ny ankamaroan'ny, ary izay mety hanimba ny lela sy ny ramy ary azo hifantoka tanteraka ao an-ra.
SOSO-KEVITRA! Ianao miaro ny nify amin'ny fanilihana azy ireo. Mety koa ny maka izany ho dingana kokoa, ary manomboka mampiasa toothpaste izay whitens ny nify.
Izany ihany koa dia afaka hahatonga mora kokoa mora staining.
Miresaha amin'ny mpitsabo nify momba ny salama fomba mahafotsy ny nify vao mividy na inona na inona. Ny mpitsabo nify dia hahafantatra izay tsara indrindra safidy dia avy any, ary izy koa ho afaka ny hilaza aminao ny momba ny lafiny sasany vokatry mifandray amin'ny rafitra ho nify Whitening.
SOSO-KEVITRA! Ataovy fahazarana ny flossing ny nify. Flossing fanampiana in fanesorana takelaka, Lasa mavomavo izay olana amin'ny nify.
Raha ny vavanao manomboka hanisy ratsy, avy hatrany intsony Whitening. Raha hiaina fahatsapana raha mampiasa Whitening vokatra, tsy maintsy avy hatrany hijanonako fampiasana ny nanafintohina vokatra mandra-afaka hiresaka ny olana miaraka amin'ny mpitsabo nify.
Fa fotsy nify, tsy misotro dite na kafe. Ireo zava-pisotro discolor nify. Raha mba hisotro kafe, Ataovy azo antoka ianao hosasany ny vavany avy hatrany rehefa ianao dia atao. Izany dia afaka manampy miadana misy vokatra ratsy eo amin'ny zava-pisotro ireo ny nify.
SOSO-KEVITRA! Miezaha tsy hihinana Citrus voankazo raha tianao ny nify mba hijery fotsy. Ankoatry ny, tsy ny ranom-Citrus voankazo.
Miresaha amin'ny nify Whitening dingana. Aza mahafotsy ny nify rehefa hatao amin'ny teny anglisy ho an'ny lavadavaka na mpitsabo nify asa.
Tokony kosohy ny ravina maina helo sy ny voasary peels ho vovoka. Add rano izany vovoka sy borosy amin'ny mifangaro ity. Raha manao izany dia hanampy ihany koa ny fisorohana ny aretina sy ny lavadavaka hihy.
SOSO-KEVITRA! Ampiasao Walnut hodi-kazo mba mahafotsy ny nify. Makà kely kely ny hodi-kazo sy ny manosotra izany amin'ny ny nify.
Ampiasao hidrôzenina peroxyde ny mahafotsy ny nify. Afaka manao izany fotsiny amin'ny alalan'ny mandroboka ny washcloth na landihazo niara-nanatsoboka ara-nofo an-vahaolana. Hahosotrao ny lamba mando ny faritra ny nify tsy tapaka. Ny peroxyde manampy hanamaivana stains sy ny lamba Mandroa dia hanao toy ny scrubber.
Misy fanafody voajanahary dia hanampy mahafotsy nify, toy ny paoma cider vinaingitra. Izany fomba manafoana manampy bakteria sy stains eo am-bavanao, tahaka ny manadio ny nify ao amin'ny dingana. Gargle indray mandeha isan'andro, ankapobeny maraina, ny paoma cider vinaingitra, ary manaraka izany ny fanilihana ny nify.
SOSO-KEVITRA! Miborosy nify sira. Salt dia fanafody izay voajanahary ary afaka manampy manala ny ny stains amin'ny nify.
Chase tasy-miteraka misotro amin'ny rano. Rano iray vera hosasany misakana ny tasy mahatonga zava-pisotro avy amin'ny fametrahana. Hevitra iray hafa dia ny fampiasana ny mololo, rehefa misotro zava-pisotro miloko mainty.
Miborosy nify amin'ny akondro Peel. Ity dingana ity dia tena tsotra sady lafo, mba hahafahanao hametraka eo an-isan'andro. Rehefa efa peeled ny akondro, mihazakazaka ny Peel noho ny nify fotsiny eo anoloanao miborosy azy. Rehefa manao izany, miborosy nify rehefa ara-dalàna te. Izany no hanome anareo avy hatrany Whitening vokatra.
Ampiasao ny volomboasary ny malefaka Peel lafiny mba hanary ny stains sy manao ny nify. Azonao atao ihany koa ny volom-boasary Peel maina afangaro amin'ny hotetehina nitoto helo-drano ravina mba hanao Mametaka noho ny nify. Ataovy azo antoka ny hosasany ny vavanao tsara afterwords mba hanala ny voankazo rehetra siramamy.
Aza mihaino na toothpaste izao izay milaza fa hanome anao Ho fotsy nify. Mety hanome anareo Whitening fiantraikany kely, fa hahatsapa fa hafa teknika dia angamba ilaina. Raha mbola misafidy ny hampiasa ny Whitening toothpaste, ho azo antoka ny hahazo izay manana fanaova soda ao.
Anontanio ny mpitsabo nify mba hanome anao ny gel azo ampiasaina ao an-tokantrano mba hanampy mahafotsy mijery ny nify fotsy. Ity teknika dia afaka hahatonga ny nify amin'ny alalan'ny hatramin'ny valo matoatoa!
Raha miezaka hahazo fotsy nify, mandehana any amin'ny mpitsabo nify fa azy nanadio isaky ny azonao atao. Nify tapaka cleanings dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra azonao tafiditra ao amin'ny Whitening ny nify regimen. Mila mitsidika ny mpitsabo nify ho an'ny cleanings, fara fahakeliny, isaky ny enim-bolana.
Mila mba ho azo antoka manana ny tsara borosy nify mba miborosy nify araka ny tokony ho karazana. Ny herinaratra borosy nify no tsara indrindra amin'ny fanesorana takelaka sy ny stains voangony amin'ny nify isan'andro. Izany dia hanana ny nify mazava ho madio sy fotsy.
Tokony manadio sy mahafotsy ny nify raha manaraka isan'andro amin'ny toothpaste sy flossing. Mifidiana entana izay ahitana fanaova soda ho toy ny voajanahary Whitening ingredient tahaka ny tena mahomby amin'ny fanesorana stains.
Azonao atao foana ny nify fotsy amin'ny alalan'ny fampiasana ny mololo rehefa misy Whitening procedure.Drinks avo tahan'ny ny loko pigments izay afaka voalotoko ny nify. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny mololo no hisorohana anoloan'ny nify avy manana fifandraisana mivantana amin'ny staining simika.
Mihinàna sakafo mahasalama izay manopy. Ny abrasiveness ny manopy sakafo manadio hametraka hery ny nify rehefa mitsako azy. Hanaikitra azy rehetra, aza manapaka azy!
Manao ny tenanao ho frezy Mametaka noho ny fanilihana nify. Frezy Efa ela no raisina mba mahafotsy ny nify. To afangaro ny sasany Mametaka ho anao, dia mila 1/4 kapoaka rano, leviora (1/2 kapoaka) ary telo frezy izay efa nopotsehina.
niala tamin'ny sigara
Aza mifoka sigara, na sigara. Roa ireo no voaporofo ny discolor ny nify hatao discolored. Miezaha hiala amin'ny sigara ny hitandrina ny nify mba tsy hiverina mavo. Raha manana olana ny niala tamin'ny sigara, hevitra amin'ny dokotera na fanafody ho an'ny soso-kevitra hanampy anao ao amin'ny dingana. Mila fanohanana maro sy mafy orina tsara torohevitra.
ankehitriny, tena tsy misy fialàna azony noho ny mandefitra amin'ny mavo tsiky. Afaka mahazo tsiky amin'ny alalan'ny fampiasana ny iray amin'ireo nify Whitening maro entana an-trano natao ho an'ny fampiasana. Ny Whitening fitaovana azonao ampiasaina ao an-trano dia tsy lafo be noho Whitening ny nify fomba, ary ankapobeny hanome anareo ny vokany mitovy.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 5, 2016 amin'ny 1:02 AM
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: Fruits, frezy, nify Whitening, Whitening entana, Whitening nify